Olee otu m ga-esi edobe igwe kwụ otu ebe n’èzí? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Nchekwa ọgba tum tum - depụtara ajụjụ na azịza
Nchekwa ọgba tum tum - depụtara ajụjụ na azịza
Olee otu m ga-esi edobe igwe kwụ otu ebe n’èzí?
.B.igwewụsịrị bụ ihe gị ncheben'èzínchekwa nchekwa ma ọ bụrụ na ịnweghị ebe ndọba ụgbọala ma ọ bụ ụlọ ndị ọzọ. Nakwa idebe igwe kwụ otu ebe na eleghị anya, ha nwere ike ịgbachi ma na-enye nchebe zuru oke.Igwesheds nwere ike ịnabata ihe karịrị otuigwe kwụ otu ebe, ma anaghị ewekarị ohere buru ibu.
(egwu dị egwu) (egwu dị omimi) - Tupu m ruo isiokwu ahụ n'onwe ya, naanị m chọrọ ịkọwa na nke a abụghị usoro egwu ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ, mana ọ dị nwute na anyị nwere ụfọdụ ndị na-enweghị isi n'etiti anyị chọrọ izu ohi anyị mpako na ọ joyụ, ma ọ bụrụ na ị dị ka m, ị rụọla ọrụ nke ọma ma rụsie ọrụ ike ka ị nwee ike ịchekwa ịzụta ya. Yabụ taa ka anyị leba anya na ntinye ole na ole ka ị ghara iyi akwa ochie na ịgbachi gburugburu gị na njem ọzụzụ gị. Ọzọkwa, isiokwu a bụ naanị ịnwa ịkwụsị onye ohi na-ezu ohi karịa pro n'ihi na n'eziokwu, ha ga-enweta ihe ọ bụla ị tinyere n'ụzọ ha. (Egwú na-atọ ụtọ) Nke a bụ kpọmkwem mgbe ndị na-agba ịnyịnya ígwè hụrụ kọfị n'anya.
Ha hụrụ kọfị n'anya, ha hụkwara achicha n'anya. Yabụ ọ bụrụ na ị gaa kafe, gịnị ma ị hapụ igwe kwụ otu ebe na akụrụngwa kachasị elu. Yabụ nnukwu ihe nkedo na obere obere azụ azụ, yabụ ọ bụrụ na mmadụ abịarute wee nwaa ịnara ya, belụsọ ma ewuru ha dịka onye na-agba ọsọ, ọ nwere ike ọ gaghị ama etu gia si arụ ọrụ na ha agaghị abanye nwee ike iji ike zuru ezu wepụ ya ma ị ga - eme ka ha kwụsị otu ahụ! (ihe omimi di egwu) (egwu di egwu) Ugbua onye ozo nke m nwetara sitere na enyi nke uzo Adam Hansen mgbe m huru ihe na ibe Twitter ya.
Ihe ọ na-eme mgbe ọ kwụsịrị na kafe ma ọ bụ naanị nwa oge na rim breeki ụkwụ ya, ọ na-ewepu wiil ahụ site na nkwụsị, na-agbanye ya ntakịrị ma ọ bụ azụ ka taya ahụ wee dabere na okpuru breeki ma ọ bụ okpueze ndụdụ , nke pụtara na ọ bụrụ na mmadụ anwaa izuru ya mgbe ha gbalịrị inweta ya, ọ ga-ada na ihu ha, jiri igwe kwụ otu ebe a enwere m breeki a ka ị nwee ike wepu ihu igwe gị, nke pụtara na ọ bụrụ na onye ohi nwara na-agba ịnyịnya na ha, na-atụ anya na ụkwụ ihu ga-ada ma ha adaa ihu gị, ọzọ, ị nwere ike iburu wiil azụ ahụ site na nkwụsị ahụ ebe ahụ, cheta iji weghachite usoro axis, nke ahụ nwere ike ọ bụghị naanị ị nweta gị akpịrị, ma wepụkwara gị n'akpa uwe gị, na-emebi ụfọdụ igwe kwụ otu ebe. (egwu dị egwu) (egwu obi ụtọ) Ọ bụrụ na ịnwe breeki ọkọlọtọ enwere m ike inye gị ndụmọdụ naanị ka ịtọghe usoro ọpụpụ ngwa ngwa na caliper n'onwe ya, mechie gbọmgbọm ahụ wee gbalịa ịmechi mkpọchi ngwa ngwa. , ya na ya n'ụzọ nkịtị, ọ bụrụ na mmadụ anwaa ịmalite ịnyịnya ígwè, ha na-aga n'okporo ụzọ na-egbochi brek. Ọ gaghị adịrị m mfe ọkacha mmasị m, mana m ka na-ahụ ndị mmadụ na-eme ya mgbe ha tụgharịrị na mpụga ụlọ ahịa na kafe site n'oge ruo n'oge ha na-atụgharị igwe kwụ otu ebe ha, nke bụ ihe otu n'ime ndị ohi a mere ka ọ nwekwuo ahụ erughị ala na -eje ije ma were ya na ị.
Dabere na ebe ị na-aga na ohere ole ị nwere na akpa gị dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iwere ihe dị ka nke a, nke a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Nke a sitere na Hiplok na ọbụlagodi mkpọchi agbakwunyere. Gaa na njem kọfị gị n'ihi na ọ nwere ike pere mpe dabara na akpa uwe gị, ma ọ bụ ọbụlagodi na ị nọ n'ụgbọ okporo ígwè ebe ị na-enweghị ike ilekwasị anya na igwe gị mgbe niile, tụfuo onye ohi ma bụrụ anyị n'eziokwu, ọ bụrụ na a na-ekpochi igwe kwụ otu ebe na otu abụghị, onye ohi yikarịrị ka ọ ga-ewere ụdị a na-emeghe.
Ugbu a ị nwere ike ịme obere aghụghọ ọzọ dị ntakịrị site na iji okpu okpu na ikechi gị dị ka ihe mgbochi nwa oge na ndị enyi m na-agba ịnyịnya ígwè, anyị nwere iwu, enweghị okpu agha na tebụl cafe. Ya mere, gịnị ma ị jiri ya maka nke a? Yabụ dị kechie ya na okpokoro etiti, tinye ya na ihe ị nweghị ike imegharị. Ya mere ọ bụrụ na onye ohi anwa were ya, ha agaghị enwe ike. (egwu dị egwu) Ugbu a obere obere onyinye a sitere n'aka onye ọrụ ibe m bụ Ollie bụ onye kwuru ihe kpatara ị ga-eji nweta akwụkwọ, tinye nkọwa gị niile na ya, kpoo ya ma tinye ya na otu n'ime akpa ọkpọ ahụ, slide ya n'ime ọkpọ kacha elu dịka ọmụmaatụ , wota ndụdụ ahụ ma mee otu ihe ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ezuru igwe kwụ otu ebe gị, mana ọ dabara nke ọma na ndị uwe ojii ga-achọta ya mgbe ịchọrọ ịchọpụta ya, ị nwere ike ịgwa ha kpọmkwem ebe zoro akwụkwọ ahụ ma gosipụta na ọ bụ nke gị. N’ezie, ị nwere ike ịrịọ enyi gị ka ọ lekọta igwe kwụ otu ebe gị mgbe ị kwụsịrị n’ụlọ ahịa kọfị, ka ị na-abanye wee nweta ihe, na nke ọzọ, naanị iji nwee nchekwa. Lee anyị, ole na ole nche hacks, nke mere na mpako na ọ joyụ gị na-anọ ntakịrị nchebe mgbe ị banyere ngwa ngwa maka ntakịrị kọfị na achicha.
akpaaka ụlọ elu ụlọ elu
Olileanya na ị na-enwe ya, biko mee ka m mara, ọ bụ ezie na gị nche hacks na-dị nnọọ ala na ihe ngalaba n'okpuru. Chetakwa ịmasị na ịkekọrịta isiokwu a na ndị enyi gị, echefula ilele ụlọ ahịa GCN na shop.globalcyclingnetwork.com, anyị nwere ọtụtụ ihe ị ga-anwale.
Ma ugbu a, maka nnukwu ederede ọzọ, oge a, olee otu esi arụ ọrụ freewheel? Kedu otu ụdị freewheels dị iche iche si arụ ọrụ? Naanị pịa ebe a n'okpuru.
Kedu ụzọ kachasị mma iji chekwaa igwe kwụ otu ebe?
Ezigbonchekwa nchekwaga-adabere na ohere gị dị: ụgbọala, ụlọ, ụlọ ma ọ bụnchekwawụsịrị Onye ọ bụla nwere ngwa dị iche iche, mana n'ozuzu, racks na-ahapụ gịụlọ ahịanke giigwe kwụ otu ebekwụ ọtọ, wiil n'akụkụ n'akụkụ mgbidi ahụ, dịkarịsịrị n'akụkụ ya, weghara ohere pere mpe.
Ndewo, nke a bụ Jürgen. N’afọ 2014, site n’enyemaka nke Kickstarter, M malitere DaHanger, igwe kwụ otu ebe maka imewe ọhụụ. N'oge m na-eme mkpọsa, enwetara m ọtụtụ nzaghachi na ajụjụ n'aka unu, ụfọdụ n'ime ha ka m na-echeta dị ka a ga-asị na ha bụ ụnyaahụ.
Hey, lelee Kickstarter anyị
Egwu! Ego ole ka o jidere, otu igwe kwụ otu ebe, nke ahụ ọ bụ? 'N'ezie?' Enwere m igwe kwụ otu ebe isii. Enwere m ịnyịnya ígwè asatọ. Enwere m igwe kwụ otu ebe ise.
Abụba igwe kwụ otu ebe. Bikegba ọsọ igwe kwụ otu ebe. Single ọsọ.
Ugwu igwe. Sochie igwe kwụ otu ebe. Cyclocross igwe kwụ otu ebe.
Etosiri m itinyekwu igwe kwụ otu ebe n’elu mgbidi. Etosiri m itinyekwu igwe kwụ otu ebe na mgbidi. Etosiri m itinyekwu igwe kwụ otu ebe n’elu mgbidi.
Ọ dị mma, laghachi na mbadamba eserese. I nyere m ezigbo ndepụta chọrọ ogologo oge n’oge mkpọsa izizi anyị. Mgbe m wepụsịrị ndị ahụ na-apụ apụ, aghaghị m ịchọta azịza nye ajụjụ kasị mkpa: 'Olee otú m ga-esi nyagide ọtụtụ ịnyịnya ígwè n'elu mgbidi?' Azịza.. zute Dan.
Gịnị mere Dan ji dị mma maka ọtụtụ igwe kwụ otu ebe? Ọfọn, enwere ụzọ dị iche iche iji kwụnye igwe kwụ otu ebe na mgbidi: nko n'ihu, ha siri ike iji ma were ọtụtụ ohere site na ịdọkwasị igwe kwụ otu ebe na mgbidi; kwụ brackets ma ọ bụ shelf, ha dị mfe iji mana weghara ọtụtụ oghere nke nwere ike ịbelata ọnụọgụ igwe kwụ otu ebe na mgbidi. Ma e nwere Dan: Dan nwere ụkwụ ndị ọzọ toro ogologo nke na-etinye igwe kwụ otu ebe n'otu akụkụ nke na-enye ohere ịwụnye nsogbu. Nke a na-enye gị ohere mgbidi ọzọ maka igwe kwụ otu ebe na-enweghị iburu elu ala ọzọ.
Mgbe ọtụtụ prototypes, Achọpụtara m nri size, akụkụ na gaps nke ga-dabara niile anyịnya igwe na pedal m nwere ike ịhụ; Nnukwu shelf dị n'ebe ahụ iji chebe mgbidi ahụ pụọ na akwa na ịnye nkwado ọzọ. Ọ bụ ihe obi ụtọ zuru oke na Dan, ọ gosipụtara ochie ochie maka anyị ma dozie ala ụlọ n'ụlọ ahụ dum, ọ ga-abụ ezigbo enyi kacha mma. Echere m na ọ dị mkpa otu anyị si ebi ndụ na ihe ndị gbara anyị gburugburu na-ewetara anyị ọ joyụ na anụrị.
Ndị na-eme anyị dị njikere ịga ma jiri ego Kickstarter mee ihe na nke mbụ maka imepụta ihe na ime ihe n'eziokwu, mụ na nwa okorobịa a na-akpakọrịta ogologo oge ugbu a, ma eleghị anya oge buru ibu, mana ọ mara ezigbo mma. Bee, nke ahụ mara mma. Clug bụ obere ọmarịcha obere ma dịkwa mfe ịwụnye clip nke na-ejide igwe kwụ otu ebe ma na-enyere aka idobe ụlọ gị ọcha. ọ bụ otu nha na ọkara ịdị arọ nke kiwi.
Aha ya na-ada ka ihe nhicha mmiri, mana ọ bụghị, na dịka ị ga-ahụ na ngosi a, ọ dị mfe ịwụnye karịa Windows95, ọ ga-abụkwa ebe igwe gị ga-ebi na ebe ọ bụla i nwere ike iche. nwere ike. Anyị nwere nsogbu ebe a na Hurdler Studios, anyị bịara jiri igwe anyịnya anyị rụọ ọrụ kwa ụbọchị, mana anyị enweghị ebe dị mma ịchekwa ha ebe ahụ; Na nsogbu na aka, anyị wepụtara chepụta nkọwa ike a udi nke ga na-eche mgbalị ịgbakwunye gị igwe kwụ otu ebe na. Anyị gabigara ụyọkọ nke iterations, nwalere ruo na njedebe, ma mepụta ruo mgbe ihe niile ziri ezi; Clug dabara ugbu a na taya igwe kwụ otu ebe, mana anyị nwere ọdịiche ndị ọzọ na bọọdụ ịbịaru.
Anyị nọ ebe a na Kickstarter iji bulite ego anyị chọrọ iji zụta ngwaọrụ nchara na akụrụngwa nke ga - enyere anyị aka iwepụ Clug site na puku kwuru puku. Site na 3D ibipụta ọdịnihu, anyị na-edozi ọdịiche dị n'etiti mkpọsa ahụ na nnyefe nke ụdị mmepụta nke Clug site na ịnye ndị na-akwado 200 n'efu 3D na-akwado ya ozugbo enyere anyị aka n'ụzọ gara nke ọma; Site na ntinye nke dollar ise ma ọ bụ karịa, ị ga-enweta faịlụ 3D dijitalụ iji bipụta nkụ nke gị n'ụlọ. Anyị nwere olile anya na ị ga-enwe ọ Clụ na Clug dịka anyị nwere mmasị ịkọwa ya ma were ya ruo ebe a.
Anyị ga-achọ ịkele gị n'ọdịnihu maka nkwado gị ma na-atụ anya inye gị Clug ozugbo enwere ike. Daalụ! Ebumnuche anyị bụ isi maka itolite Steady-Rack bụ ịchọta azịza igwe kwụ otu ebe dị mfe iji, na-echekwa ọtụtụ ohere yana onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ nwere ike iji. Anyị chere, gịnị kpatara anyị ji akwụsị ebe a, ka anyị tinye atụmatụ na uru ole na ole ndị ọzọ na akwa ahụ nke na-eme ya nchekwa nchekwa zuru oke.
Otu n’ime nsogbu dị n’ịchekwa ịnyịnya ígwè bụ akara ukwu nke sistemụ nchekwa nchekwa; Nke a bụ ezigbo ihe atụ: nko mkpuchi nchekwa nwere otu igwe kwụ otu ebe na ya na ebe atọ na-akwụsi ike na ịnyịnya igwe atọ na ya, ha niile n'otu mgbidi ahụ; Anyị arụnyela otu nko na ị nwere ike ịnweta ụdị nko a dịgasị iche iche n'ahịa taa n'akụkụ akụkụ anyị na-adịgide adịgide, anyị etinyewokwa ha iche na ibe ha; Ọ bụrụ na m chọrọ iwepụ igwe kwụ otu ebe a site na iji usoro nko ọdịnala, ọ gaghị ekwe omume na-ewepụghị igwe kwụ otu ebe ọ bụla, mana n'ihi Steady-Rack pụrụ iche na-agagharị agagharị, naanị ihe m ga-eme bụ ịkwanye igwe kwụ otu ebe n'akụkụ. nke m choro iwepu aka, hapu aka ya ma anyi wepu ha n ’uzo. Pụọla na igwe kwụ otu ebe gị, ị laghachitela n'ụlọ, ma nwee ụgbọ ala na-arụzi ụgbọala kpọmkwem ebe igwe eletriki igwe gị dị, ugbu a na Stead-Rack ị gaghị ebugharị ụgbọ ala ahụ ọzọ, naanị ị ga-eme na-anya gị igwe kwụ otu ebe na ya N'azụ wheel, tinye ya, na i nwere ike ibu na ibuputa na otu ebe rack ọ bụla n'akuku, ọ na-ekwesịghị ịdị n'akụkụ aka nri na mgbidi, snap na kpọgidere ogbe ahụ, ma ọ bụrụ na m nweta ugbu a, agaghm ebugharị ụgbọ ala ahụ, sụgharịa wiilị a n'ụzọ, dọpụta wiilị a ntakịrị na-agbagharị agbagharị na m ga-ebutu ya n'ụzọ dị mfe Otu ihe dị na Steady-Rack bụ na igwe kwụ otu ebe na-anọdụ ala na ngwongwo ibu ma ọ nweghị kọntaktị ọla-igwe ma ọlị.
Akụkụ ọzọ nke usoro mkpọchi a kwụ ọtọ na isi ihe dị mkpa bụ na ọ bụ akpa akwa nchekwa maka na ọ bụrụ na ị na-abanye na akpa ahụ na mberede, ọ ga-eme ka igwe kwụ otu ebe pụọ. Emere akpa akwa ahụ ka ọ daa ka ị belata ya mgbe i jiri ya, mgbe ị mechara, ị nwere ike ịpịpịa ya. Na mgbakwunye na atụmatụ niile bara uru ma na-arụ ọrụ nke Steady-Rack, otu n'ime ihe ndị anyị chọpụtara banyere nko ndị ọdịnala bụ na ha anaghị ele anya dị mma, yabụ anyị kpebiri ịme Steady-Rack ọ bụghị naanị na ọ bara uru ma na-arụ ọrụ , kamakwa nnukwu onye na-ele anya Porter.
A na-etinye shelf plastik na kit gị. Emere mpe mpe akwa ka mgbe ị na-adọba ma na-agbagharị igwe kwụ otu ebe, ị na-etinye wiil azụ n'azụ n'akụkụ ugwu ahụ na n'akụkụ nke a, nke a na-eme ka igwe kwụ otu ebe na-aga n'ihu ma na-enye gị ohere ịfegharị ịnyịnya ígwè gị ma ọ bụ emeghị ka ihe ize ndụ nke igwe kwụ otu ebe na-agbagharị ma na-emetụ ibe ha aka.
Kedu ka esi echekwa igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ịnweghị ebe ndọba ụgbọala?
Mụ okorobịa! Oge oyi na-abịa ma amaghị m maka gị, mana m nke ahụ pụtara na ọ bụ oge iji wepu ihe niile ahịhịa na-arụzi ụgbọala ka m wee nwee ike iweghachi ụgbọala m, yana dịka m na-ekwu na afọ ole na ole gara aga Ka ha na-arụzi ụgbọala ahụ. N’izu ụka ọ bụla, m na-eche ihe m mejọrọ n’ịhazi ebe a na-adọba ụgbọala. Taa achọrọ m isoro gị kerịta njehie ndị a ka ị nwee ike zere ha. Nnọọ.
M Cindy si Smart Family Ego. Aga m enyere gị aka ịzụ ahịa karịa, ịchekwa ego, ma chekwaa oge ka ị nwee ike ịgbanwe ụwa ọzọ. Anyị batara n'ụlọ a ihe dị ka afọ abụọ gara aga ma anyị enwebeghị oge iji hazie ebe anyị na-adọba ụgbọala anyị ebe ọ bụ na anyị enweghị ụlọ mpụga anyị ga-etinye ngwa ngwa ahịhịa anyị niile na ebe anyị na-adọba ụgbọala ma anyị mere ya.
Anyị enweghị ohere ga-arụ ọrụ otú ahụ, ya mere, anyị ga-akpachara anya gbasara oghere dị n’ebe anyị na-adọba ụgbọala anyị ka anyị nwee ike itinye ụgbọala anyị abụọ na ya. Ná ngwụsị nke isiokwu ahụ, m ga-egosi gị otu ebe ụgbọala ahụ si mepụta. Ọ bụ nnukwu ọrụ, mana m hụrụ ya n'anya.
Ebe m rụsịrị ọrụ ike n’ebe a na-arụzi ụgbọala maka izu abụọ gara aga, echetara m ihe niile anyị mejọrọ n’ụlọ anyị bi na ya, ọtụtụ ihie ụzọ na ịhazi ụlọ akwụkwọ ọ bụla ma achọrọ m ka ha dee ka m wee nwee ike icheta na enyere gị aka ịghara ime otu ihe ahụ. Emehiere m na mbụ m na-eme mgbe m na-ahazi ebe a na-adọba ụgbọala abụghị ịtọgbọ ụgbọala ahụ kpamkpam. Enwere ụfọdụ ihe kpatara ị ga - eji chọọ ime nke a.
Maka otu, ị nwere ike mechaa kpochaa ya nke ọma. Mgbe ọ tọgbọ chakoo, ị nwere ike ịfụcha mpempe akwụkwọ niile, hichaa ya nke ọma, ma mee ka ọ dị ọcha n'ezie, mana ọ na - enyere gị aka ile ebe a na-adọba ụgbọala dị ka bọọdụ na-enweghị oghere. Mgbe inwetachara ihe niile wee were anya ọhụrụ lelee ya, ị ga - ebido n’eche echiche banyere ebe a ga - edowe ihe n’ụzọ ezi uche dị na ya ọ bụghị naanị ebe ha nọbu ma amaghị m maka gị, mana ụlọ ọ bụla m nwere ebe a na - adọba ụgbọala. ihe dị n'ime ụgbọala ebe ndị nwe ya gara aga na mgbe ụfọdụ ọ na - enyere aka ịpụ nke a iji chetara gị na ị ga - apụ.
Otu ihe m mụtara n'ụzọ siri ike bụ nke a: echefula ichebe onwe gị mgbe ị na-arụ ọrụ n'ime ụgbọala. Enwere otutu ihe di nkọ na ulo akwukwo, ya mere ichikota aka oru iji kpuchido aka gi na ntu gi mgbe ichoro bu ezi echiche. Ọzọkwa, achọpụtara m na, ọkachasị ma ọ bụrụ na m na-eji broom ma ọ bụ ihe ọkụkụ mpempe akwụkwọ na-arụzi ụgbọala, ihe nkpuchi ihu nwere ike inye aka mee ka uzuzu niile pụọ, na maka onye dị ka m nke nwere oke nfụkasị, ọ nwere ike ime mgbanwe.
Debe ihe a na akpa ume m, echefula ichebe onwe gị mgbe ị na-arụ ọrụ n'ime ụgbọala. Ihiehie ọzọ m nwere ike ịkwụsị bụ ịhapụ oge zuru ezu iji hazie ụgbọala ahụ. Mụ na di m chere na ọrụ ọhụrụ a ga-ewe ma eleghị anya otu ụbọchị, ma eleghị anya ụbọchị abụọ.
O were anyị ụbọchị izu ụka anọ zuru ezu tinyere ọtụtụ mgbede. Ọ were anyị ruo mgbe ebighi ebi ịhazi ebe ndọba ụgbọala. Obi dị m ụtọ na anyị mechara mee ya, mana ọ ga-adị m ka ya bụrụ na anyị gaara enwe ezi uche karịa ogologo oge ọ ga-ewe.
M ga-ekwu ma ọ bụrụ na nke gị bụ ọgbaghara nye ya opekata mpe izu ụka abụọ zuru ezu. Ihe obula anyi puru ichota bu idobe ihe n‘ime ugboala nke na adighi ya. Anyị nwere ụfọdụ ihe nzuzu mara mma na ụgbọala anyị, dị ka igwe na-agbakwunye ihe ochie.
Kedu ihe kpatara nke a na ebe ndọba ụgbọala? Ọ gbakwunye! Tupu ịmalite ịhazi ụlọ ụgbọala gị, chee echiche nke ọma gbasara otu ụdị ihe ị ga - achọ ịnwe n ’ụlọ ụgbọala gị dabere na etu ị chọrọ isi jiri oghere ahụ. N’ụlọ a, anyị nwere okpuru ulo a na-emechabeghị edobe ya maka ebe a na-echekwa ya, enweghị ihe ga - eme ka anyị tinye ihe ndị na - abughi n’èzí na ụgbọala anyị. Otú ọ dị, na a gara aga n'ụlọ anyị enweghị okpuru ulo ka anyị na-arụzi ụgbọala na-enwe a n'ozuzu nzube nchekwa maka ihe ndị dị ka Christmas decorations na ihe niile.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ọtụtụ ebe nchekwa na ebe ị na-adọba ụgbọala, mgbe ahụ ị kwesịrị iche echiche banyere ịgbakwunye ihe ndị dị ka shelf ụlọ nke nwere ike ijide nnukwu bins ma chee echiche banyere otu ị ga-esi jiri ya dị ka ebe nchekwa na ebe bara uru. Ihe ọzọ ị ga - achọ ịtụle bụ iji ndọba ụgbọala dịka ohere bara uru, dịka.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ya mee otu n’ime ebumnuche ndị a, ihe niile ị ga - eme bụ ime ka oghere dị na ụgbọala maka ihe ndị dị ka. Maka anyị, anyị chọrọ ịmachi ya naanị ihe ndị dị n'èzí, yabụ ngwaọrụ ahịhịa, igwe kwụ otu ebe, na ihe eji egwuri egwu n'èzí bụ ihe niile dị n'ebe ahụ ma nke ahụ nyeere anyị aka ịbelata ihe ihe soro ha. ebe ahụ na ihe ihe na-aghaghị ịga.
Ndudue nke m meworo ugboro ugboro mgbe m na-ahazi ogbako anyi bu na echeghi m banyere uzo, na achoro m anya na uzo ato. Ka ị na-agagharị na ụgbọala gị, cheta na ịnwere ohere ịgba ọsọ. Ikwesiri iche echiche banyere inwe oghere ikuku iji meghee ọnụ ụzọ ụgbọ ala na ịkwesịrị iche banyere inwe oghere dị n'elu isi gị.
N'oge gara aga anyị nwere ụfọdụ anyị anyịnya igwe eyịride n'uko na m kpọrọ asị mmetụta nke inwe ha nso m isi ka anyị na-aga site na ụgbọala. Mgbe ọ bụla ị na-abanye n'ụgbọala dị na ụgbọala ahụ, ị ​​kwesịrị iche echiche banyere ebe ọnụ ụzọ ndị ahụ na-emeghe na ma ọnụ ụzọ ụgbọ ala ndị ahụ nwere ike ịdakwasị mgbidi ma ọ bụ ụgbọ ala ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na ụgbọala ahụ. I kwesiri iche banyere otu ị ga esi chebe ha.
Nwere ike iji noodles ọdọ mmiri mepụta ọmarịcha ihe mgbochi mgbe ị nwere ihe nwere ike ịnweta n'ọnụ ụzọ ụgbọ ala. N'ikwu okwu banyere oghere, ị ga-achọ ịpụ ala dị ka o kwere mee, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-adọba ụgbọala n'ime ya. Otu n’ime ihe i nwere ike iche bụ ibuli igwe kwụ otu ebe n’elu ala.
Nwere ike ịrịgo a na mgbidi. You nwere ike ịhụ nke ihe nwere ọgụgụ isi maka ịrịgo n'uko ụlọ gị. Mgbe ụfọdụ, ubube n’uko ụlọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma.
Ekwurukwa m na bins ndị a dị n'elu bụ ụzọ dị mma iji gbakwunye ọtụtụ ohere nchekwa ebe ahụ. Ọzọkwa, cheta ka ịdọgide ngwaọrụ n’elu mgbidi. Anyị mere ụdị ihe ndị a n'ime ebe anyị na-adọba ụgbọala, ọ mekwara ka ụgbọala ahụ dị ukwuu.
Ọ nyeere aka n'ezie. Enwere m ike ịdọpụ uche m kpamkpam na otu n'ime ọnyà m na-adakarị mgbe nhicha ụgbọala na-adọpụ uche ya na ụdị ọrụ ndị ọzọ, ma ọ bụ ihicha ihe ma ọ bụ dozie ihe ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara ihe ndị dị na ụgbọala. Ihicha na ịhazi ụlọ ụgbọala bụ ihe niile ịchọrọ iji lekwasị anya na ọrụ a n'ihi na ọ dị mfe ịdaba na oghere ndị ọzọ.
Oge a ka anyị kwesịrị idozi ọwa mmiri dị n ’ụlọ ụgbọala anyị maka na ọ na-ada. Anyị na-atụ egwu na mmadụ nwere ike ịdaba na ya. Ekwesiri ime ya, mana ọ ga-abụrịrị na a ga-eme ya na ngwụsị izu tupu anyị amalite ịhazi ụgbọala.
Ihe ọzọ m na-eme kpam kpam bụ ịzụrụ ihe nchekwa nchekwa tupu m rụpụta ihe ịkwesịrị ịchekwa. Ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ ịga ụlọ nkwakọba ihe ma chọpụta ọmarịcha nnukwu ngwongwo ebe nchekwa ụgbọala, mana ị were ya n'ụlọ wee chọpụta na ịnweghị nọmba nko na ihe ịchọrọ maka ihe ndị dị mkpa gị ụgbọala. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọpụta ihe ị ga-echekwa.
Ihe nke abuo bu izu nko na nkpuru na ihe nile ichoro maka ihe ndi ahu. Ikwu maka nchekwa nchekwa, ọ bụrụ n’ịchọrọ idobe ihe ọhụụ, atụla ụjọ ịchọ azịza maka ihe ahụ. Anyị nwere wiilbaro debeere anyị ụgbọala na ọ bụ otu n’ime ihe ndị kasị sie ike ihe na-echekwa.
Ruo mgbe m chọrọ 'Otu esi echekwa otu wiil ịnyịnya na YouTube', amaghị m na enwere ike ịnyagharị wiilị na mgbidi. Ọ bụ nnukwu azịza, ọ dị ka ịzụta dollar ise iji mee ka obere mpempe ahụ kpọgidere na mgbidi ma ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu. Mmehie ọzọ nke a dị oke mkpa ma ọ dịghị mkpa ka ị chee echiche banyere ihe ị ga-arụzu n'ime ụlọ ụgbọala gị.
Y’oburu n’inwa idobe ugbo ala gi n’ime ya, ihe ufodu n’ime ebe a na edozi ugbo ala bu ihe siri ike iru na nke ichoghi ka ihe a mee, karisia ma oburu n’onodu ebe otutu oyi na enye. Enweghị m ike ịgwa gị oge ole m dara iru shọvel m snow mgbe anyị nwere snow. Nke ahụ bụ ihe nzuzu.
Ya mere, n’oge a, emere m n’aka na shọvel ahụ snow na-adọnye n’akụkụ ọnụ ụzọ ụlọ m ka m wee nwee ike ijide ya ma jiri ya oge ọ bụla m chọrọ. Enwere m ike iji ya na azụ azụ iji mee obere oghere maka obere akpa m. N’ikpeazụ, mgbe ịmechara ma hazie ebe ndọba ụgbọala gị, ịkwesịrị inyere ndị ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị ịdọba ụgbọala ebe ahụ ka ha mara na ha na-adọba ebe kwesịrị ekwesị.
Ndị nwe ụlọ anyị n'oge gara aga nwere bọọlụ tenis na-agbado n'uko ụlọ nke ha na-adọba ụgbọala ha ebe ahụ, nke dị mma, mana mgbe ụgbọala ahụ tọgbọ chakoo ọ pụtara na anyị na-abanye bọọlụ ahụ n'oge niile yana ụmụntakịrị nọ nso Ọ pụtakwara ụfọdụ egwuregwu tetherball na-agba agba na ụgbọala anyị nke mere ka m bụrụ onye ara. Iji mee ka ụgbọ ala m gaa ebe kwesịrị ekwesị, m ga-akpachara anya ka m ghara ịgafe n'ihu dị ka anyị chọrọ ohere iji jee n'ihu ụgbọ ala m dọbara ụgbọ ala m. M tinye teepu ahụ kpọmkwem ebe ụzọ ụgbọala ahụ na-agbada n'azụ ụgbọ ala m, mgbe ahụ enwere m ike ile ya anya na igwefoto azụ ụgbọ ala m wee hụ na ụgbọ ala m nọ ebe kwesịrị ekwesị, azụ azụ, mana ụzọ ụgbọala ahụ agaghị akụ. mgbe o mechiri.
Nke a nyeere aka mee ka ụgbọala na-adọba ụgbọala ọtụtụ ihe na-adịghị enye m nsogbu. Ọ bụ nnukwu ọrụ ịhazi ụgbọala anyị, mana enwere m obi anụrị na nsonaazụ ahụ. Anyị nọrọ ihe dị ka $ 300 na kọlọtọ.
Nke ahụ adịchaghị mkpa, mana enwere m obi ụtọ na ụzọ ha si echekwa ihe na ụzọ adịghị. Gbọ ịnyịnya ígwè ahụ na-efu ihe dị ka $ 75. Obi dị m ụtọ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma iji mee ka anyịnya igwe anọ anyị pụọ.
Emefuru m narị narị dọla ọzọ n’ebe a na-akụ azụ̀ na ihe dị iche iche, gụnyere ebe a na-adọba wiilị na ebe a na-anọ n’elu ubu. Na mkpokọta, anyị mefuru ihe dịka $ 500 na ọrụ a. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na nsonaazụ ahụ.
Ọ dị ezigbo mma inwe ike ịgagharị ụgbọala ahụ kpamkpam ma nweta ụgbọala abụọ n'ime ebe ahụ. Mgbe snow na-abịa, m ga-adị njikere wee bịa shọvel m snow. Ka ịmalitere ịhazi ụlọ ndọba ụgbọala gị, enwere m olileanya na ndepụta a ga - enyere gị aka izere otu ihe m mejọrọ ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na isiokwu a na-amasị gị, dịka ma denye aha ya na anyị ga-ahụ gị n'isiokwu na-esonụ.
Ọ dị njọ ikowe igwe kwụ otu ebe gị na wiilị?
.B.igwe kwụ otu ebeshed bụ zuru okè n'èzínchekwa igwe kwụ otu ebeihe ngwọta maka ezinụlọ nwere ogige ma ọ bụ jakịmanaọ bụghịụgbọala(ma ọ bụ aụgbọalanke ahụ nwere ohere pere mpe).Ọ bụrụ na ị nwereụfọdụ nkà N'onwe Gị,ị nwere ikeiru nke gị, ma ọ bụ zụta a dịtụ obere mara mma njikere mere.Ọnwa Iri 22, 2020
igwe kwụ otu ebe gị ntụkwasị obi gị mere ka nganga gị na ọ joyụ gị nwee ọtụtụ n'ime anyị hụrụ igwe anyị n'anya ma na-agba ha n'enweghị nsogbu n'afọ niile anyị na-elekọta ha anya nke ọma ị nwere ike iche na ị na-eme mana taa n'ezie m ga-eso ụzọ ise ị ga - esi gba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe gị ya, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala iji mee ka ngwa ngwa nke ihe ndị mejupụtara ya ngwa ngwa, mana tupu anyị abanye na nke ahụ, gbaa mbọ hụ na ịnwe ndenye aha na g10. I nwere ike ime nke a n'okpuru edemede a. Mgbe ị nọ ebe ahụ, pịa akara ngosi mgbịrịgba ka amara gị ọkwa oge ọ bụla isiokwu anyị na-aga na cafe ahụ niile dị mkpa? ị dọtara maka ọmarịcha kọfị na achicha mana jiri achicha obi ụtọ niile ị chefuru ilele mpako na ọ joyụ gị, nke m na-ekwu maka ebe a, enwere ọtụtụ ntụpọ na igwe kwụ otu ebe na ị nwere ike ịdabere na mgbidi yana gburugburu ngere a oche, ihe ọ bụla ọ bụ, ma e nwere n'ezie dị nnọọ ole na ole ihe ị kwesịrị iji iji chebe anya nke gị igwe kwụ otu ebe - jiri gị n'azụ taya na mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gị aka, ọkacha mma na aka na-eji breeki lever ma ọ bụ gia arapara na mgbe ahụ doro anya na-ejighị onwe gị nke ahụ bụ ebe a na-akpọkarị ebe m na-anọ ebe ahụ, agbaziri m igwe kwụ otu ebe megide mgbidi ma dọpụ ya n'akụkụ ịnyịnya ahụ ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ nwere ike ịkọ ya ma ọ ga-aga n'ekwughị ọbụna ojiji nke gị etiti bụghị kpam kpam mba ọ dịghị mfe itinye a etiti.
Ugbu a kọfị abụghị naanị oge, m Mana ịkwesịrị ịkpachara anya maka ị na-adọba igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ihe eji arụ ọrụ na igwe ochie gị abụghị nke kachasị mma, ụzọ dị egwu iji wee kpochapụ ụbụ ego gị. sadulu, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala onye na-ebufe unyi na uzuzu site n'okporo ụzọ kwụ ọtọ na dungarees gị. Oke mmiri ma ọ bụ aka anyị bụ usoro kachasị mma. ma ọ bụrụ na ịnweghị ike inyefe ya n'aka nwanyị, jiri nlezianya debe igwe kwụ otu ebe na akụkụ na-abụghị ụgbọala. , ọkacha mma na ala dị nro dịka ụfọdụ ahịhịa ma ọ bụrụ na ị na-eji ttbike, ọ dịghị ụzọ ị ga-esi tụgharịa ya - onye ọ bụla n'ime anyị amụtala ụzọ siri ike, n'agbanyeghị etu ma ọ bụ ebe ị na-etinye igwe kwụ otu ebe, dị n'aka na ọ bụ dị mma, kwụsie ike, ma nwee ntụkwasị obi na ihe ole na ole dị njọ karịa ịhụ, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ịnụ, ọmarịcha ịnyịnya ígwè na-aga n'okporo ụzọ Achọrọ m ịmịcha Lubricate Medium Ọ dị ezigbo mkpa ole ị kwesịrị iji na akụkụ ndị a niile dị ezigbo mma nsogbu dị mkpa na gburugburu nke ịgba ịnyịnya ígwè, yinye yinye dị ịtụbata bụ mbubata ndanda iji belata ego nke mmiri na odụk n'ime bushings na atụdo na iji belata esemokwu n'etiti Ugbu a, e nwere Olee ihe enyemaka abụọ ụdị agbụ Ọ bụrụ na anyị nwere mmiri mmanu na akọrọ mmanụ, Li mmiri maka mmiri mmiri Iji akọrọ lubrication ugbu a Ọnọdụ mmiri nwere ike ime ka mmanu ahụ wepụ ngwa ngwa ahụ, na-eme ka eriri ahụ nwee nchara na nchara nchara nke na-eburu ájá ma kpochaa ihe ọ bụla ị gafere ma mee ka uwe na akwa nke ụfọdụ ihe dị na igwe kwụ otu ebe gị. anyị na-ahụ ndị na-eme nnọọ ntakịrị na-etinye ihe mmanu n'arụ ọrịrịrịrị mmanụ na mmanụ.
Ugbu a ị nwere ike iche na mmanu dị mma ka mma, mana n'eziokwu, agbụ a na-eme ka ọ bụrụ magnet nke ga-adọta ọtụtụ unyi na unyi n'okporo ụzọ ma bibie ihe ọ bụla na - egbochi gị - cassette, wiilị ọzụzụ, wdg. ọzọ naanị na-agba ọsọ na iyi na akwa nke mmiri na igwe kwụ otu ebe gị, ya mere, ihe kachasị mma ị ga-eme bụ ijide n'aka na ị gbadara ọnụego gị, na-etecha akụkụ gị na agbụ gị oge niile, nke kachasị mkpa, n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ugbu a ọzụzụ ụlọ bụ ihe dị mkpa maka a otutu triathlete si n'ebe, ma ihe ọ bụ dị ka ibibi ma ọ bụ ibibi gị igwe kwụ otu ebe nke ọma niile na ọsụsọ dripping gị n'elu igwe kwụ otu ebe nke ọma, nke ahụ bụ mara mma na-egbu egbu stof, ọ bụghị naanị na-asọ oyi mgbe ị na sere anya gị ochie aka teepu na ezi ma ọ bụ ọsụsọ ochie ahụ nke na-esi ísì ọjọọ? Ọ bụ n'ezie nnu na ọsụsọ gị nke nwere ike ịdị oke egwu n'ihi na ọ bụrụ na ọ banye n'ime igwe kwụ otu ebe gị, ọ nwere ike ibibi, nchara akụkụ ụfọdụ, ọkachasị bolts, nke n'aka nke ya nwere ike belata ike ndị ahụ ma nwee ike ime ka ha mebie nke doro anya na ọ dị oke egwu. Iji mee nke a, gbaa mbọ hụ na ị na-etinye akwa nhicha n’elu igwe kwụ otu ebe mgbe ị na-eme nnọkọ turbo, ma ọ bụ ụdị ọsụsọ na-adọrọ adọrọ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe dị ịtụnanya, ebe ọ bụ na ị na-agba ịnyịnya ígwè gị n’ime ụlọ ma debe ya nke ọma, Gbaa mbọ hụ na ị na-asa ma na-ehicha igwe gị mgbe niile.
Ntutu na GTM anyị hụrụ n'anya ịnwe ike ilekọta anyịnya igwe anya mgbe niile yana onwe anyị n'ụlọ na ụfọdụ n'ime akụrụngwa anyị nwere ike kpalie gị ime otu ihe ahụ, ọ dị mma na obere akpa gị mana m ga-ekwu naanị kpachara anya ma yikwasị ya n'ihi na iji ngwaọrụ na-ezighi ezi ma ọ bụ ngwaọrụ na-ezighi ezi nwere ike ịdị oke egwu ma dị oke ọnụ ugbu a ma ọ bụrụ na ị banye n'ọdụ ụgbọ ala m na-eme ka ị hụ ntuziaka nke onye nrụpụta maka akụrụngwa ị nọ na ya. Ha na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ngwaọrụ ahụ, iji ya ma o doro anya na naanị ịkpachara anya na ị maghị ma na-arụ ọrụ ahụ, enweghị ihe ihere na iweta igwe kwụ otu ebe na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ịnweta ndụmọdụ site n'aka ha, ma kwere m, ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịgbanye ihe na-adọta eri ahụ, ma ọ bụ ọbụna ihe gafere ma ọ bụrụ na ị bụ obere ejighị n'aka naanị hụ na ị na-eme nyocha gị ma were ya gaa ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe. Ngwongwo gi a na-adighi nma? Ọ bụrụ n’ịgba ọtụtụ mmiri na mmiri ozuzo, ị nwere ike ibi n’akụkụ ụsọ osimiri ma igwe kwụ otu ebe gị na nke gị Chain Chain na-ehu aja aja, ihe ọ bụla ọ bụ? Inwe igwe onyi ruru unyi bu uzo di nkpa iji emebi igwe gi ugbua. Nsogbu zoo n'okpuru unyi na unyi na igwe kwụ otu ebe gị bidoro rụọ ọrụ nke ka njọ, ikekwe ọ kara nká ngwa ngwa ugbu a, m na-atụ aro ịsa igwe kwụ otu ebe gị ọsọ ọsọ ọ bụla agachara. Ọ bụrụ na ị nwere ike itucha obere oge, kpoo agbụ ahụ ma mee ya ọzọ, mgbe ahụ, o doro anya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke ọma, na-ehicha, nke ga-ahụ na igwe kwụ otu ebe na-ele anya mara mma ma mara mma, na-atụ anya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-egbochi ọdachi ndị na-arụ ọrụ na, karịa ihe niile, na-eme ka ihe ndị a na-agba ọsọ ogologo oge.
Ugbu a, enwere ụzọ ise ị nwere ike isi mebie igwe kwụ otu ebe gị, mee ka anyị mara ma ọ bụrụ na nke ọ bụla n’ime ndị a ejide gị na mberede, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chere na anyị nwere ike ịhapụ nke ọ bụla, dowe ha na ngalaba nke dị n’okpuru. Echere na ị nwere mmasị na edemede taa, dịka ya ma echefula ịgbaso GTN na mgbasa ozi mgbasa ozi
Ọ dị mma ịchekwa igwe kwụ otu ebe n’èzí?
Ihe bụ isi: yourhapụ nke gịigwe kwụ otu ebe n'èzín'ihi na otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ na-agaghị eme isi mmebi. Nwere ike ịhụ ihe ịrịba ama nke ịta nchara mgbe otu izu gachara. Mgbe otu ọnwa gacharaọjọọọnọdụ, onye ị hụrụ n'anyaigwe kwụ otu ebeakụkụ ga-amalite ibelata.Ọnwa Iri 16, 2020
Nwere ike ịhapụ igwe eletrik eletrik n'èzí?
A: Ọ bụrụhaalagịwebata batrị gị, etiti gịigwe eletrik nwere ikedebe ya n’ime ulo ma obu ulo ala.Igwe igwe eletrikekwesịghị ịdịhapụrụ n'èzín'ime ihe na-enweghị ụfọdụ mkpuchi nchebe; n'ikpeazụ, igirigi na mmiri ga-abanye n'ihe eletriki ma ọ bụrụhadịekpe n'èzí.
Ekwesịrị m ịkọwa taya ịnyịnya ígwè m maka nchekwa?
Tụgharịa ya Ulo elu: Mgbeịchekwanke giigwe kwụ otu eberuo ogologo oge, ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí, ịkwesịrịburu ibu nketaya. N'ime oge, gịtayanwere ikekọwaa. Nghọta ma ọ bụ tụgharịa naigwe kwụ otu ebega-egbochi mmebi ụkwụ.Nọvemba 12, 2012
Ọ dị mma kpọgidere igwe kwụ otu ebe?
Shimano ọbụna kwadoro ka ị gbanweeigwe isi n'ala. Ọ bụrụ naigweagbanwurukpodoro isi alama ọ bụ n'akụkụ ya, breeki ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ọfụma, na nnukwu ihe ọghọm nwere ike ime. Tupu ịnyaigwe, Jide n'aka na ị na-arụ ọrụ igwe brek ole na ole iji chọpụta na brekị na-arụ ọrụ nke ọma.Nọvemba 7, 2019
Mmiri ozuzo ọ dị njọ maka igwe kwụ otu ebe gị?
Na-agba ịnyịnya nammiri ozuzodị ize ndụ karịa ịnya na ọnọdụ akọrọ maka ihe doro anya: na-amị amị mgbe mmiri dị. Okporo ụzọ n'onwe ya. Ihe a na-ese agba na ihe mgbochi okporo ụzọ dị ka ice. Ọ na - ewe ogologo oge iji kwụsị ma ọ dị mfe ịpụ apụ, yabụ ịkwesịrị ịkwụsị breeki na mbụ, ọkachasị na mmiri mmiri.Sep 1, 2020